Nhau - Chii chinonzi Chakaomeswa Chibereko?
Muchero wakaomeswa chibereko icho chave nekubvisa ingangoita yese yemvura yemukati kubviswa kuburikidza nenzira dzekuomesa.
Chibereko chinodzikira mukati meiyi nzira, ichisiya chidiki, chine simba-chakaomesesa michero yakaomeswa.
Izvi zvinosanganisira mango, mapainapple, cranberries, mabhanana nemaapuro.
Muchero wakaomeswa unogona kuchengetedzwa kwenguva yakareba kupfuura michero mitsva uye inogona kuva chikafu chinobatsira, kunyanya panzendo refu uko firiji isingawanikwe.
Zvibereko zvidyiwa zvinonaka uye zviri nyore kuchengeta nekudya. Kuomesa kana kushayisa mvura mumuviri ndiyo imwe yenzira dzekare dzekuchengetedza chikafu. Inovaita kuti vagare kwenguva yakareba uye vanovachengeta vakachengeteka kuti vadye.
Chibereko chakaomeswa chakazara neMicronutrients, Fiber neAntioxidants
Muchero wakaomeswa une hutano hwakanyanya.
Chidimbu chimwe chemuchero wakaomeswa chine huwandu hwakaenzana hwechibereko semuchero mutsva, asi wakakomberedzwa mupakeji diki kwazvo.
Nechuremu, michero yakaomeswa ine kusvika katatu nguva iyo fiber, mavitamini uye zvicherwa zvemuchero mutsva.
Naizvozvo, kumwe kushandira kunogona kupa yakakura muzana yezuva nezuva inokurudzirwa kunwa mavitamini uye zvicherwa, senge folate.
Nekudaro, kune zvimwe zvisaririra. Semuenzaniso, vhitamini C zvemukati zvinoderedzwa zvakanyanya kana muchero waomeswa.
Muchero wakaomeswa unowanzo uine yakawanda fiber uye sosi huru yeanopa antioxidants, kunyanya polyphenols.
Polyphenol antioxidants inosanganisirwa nehutano mabhenefiti senge akavandudzwa kuyerera kweropa, hutano hwekugaya huri nani, kudzikira kwekukuvara kwei oxidative uye kudzikisira njodzi yezvirwere zvakawanda.
Michero yakaomeswa yakachipa uye iri nyore kuchengeta, uye nekuda kwechikonzero ichocho, inova zvinhu zvakakosha pakudya, zvinwiwa, uye mabikirwo. Iyi imwe nzira ine hutano kune zvinwiwa zvinotapira inogona kuve yakakosha sosi ye antioxidants uye micronutrients, iine mavitamini, folate, potasium, magnesium, uye zvakare fiber, nepo zvigadzirwa izvi zvakaderera mumafuta akazara, akazara mafuta acids, uye sodium.